गोलभेडाको एउटा डालोका कारण भएको झ ग डाले जे गर्यो … त्यो कसैले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन ! – Dailny NpNews
गोलभेडाको एउटा डालोका कारण भएको झ ग डाले जे गर्यो … त्यो कसैले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २५, २०७७ समय: १३:१९:४०
काठमाडौं / गोलभेडाको एउटा टोकरीका कारण भएको झ ग डाले हिं सा त्मक रुप लिँदा २० जनाको मृत्यु भएको छ । अफिकाको नाइजेरियामा भएको यो घटना निकै दुखदायी छ । गत महिना एकजना व्यक्ति टोकरीमा गोलभेडा लगेर दक्षिण–पश्चिम सहर इबादानको बजारमा गइरहेको बेला दुर्घटना हुँदा गोलभेडा सडकमा खसेपछि घटना घटेको थियो ।